मिलनजी, उसो भए केकीसँग फिल्म किन जुधाएको ? – Mero Film
मिलनजी, उसो भए केकीसँग फिल्म किन जुधाएको ?
निर्देशक मिलन चाम्सले सधै नै पत्रकारलाई नेपाली फिल्मलाई माया गर्नोस्, साथ दिनुहोस् भन्दै पाठ सिकाउँछन् । लगातार फिल्म निर्देशन गरिरहेका मिलनले नेपाली फिल्म चल्नुपर्छ भनेको हरेक कार्यक्रममा सुनिन्छ ।
तर, फिल्म ‘लिलिबिली’को प्रमोशनका क्रममा भने उनले फिल्म क्षेत्रबाट नै सन्यास लिने घोषणा गरे । उनले ३ बर्षपछि फिल्म नबनाउने र आफ्नै व्यवसायमा फर्किने बताए । उनले, सन्यास लिनुको कारण फिल्म क्षेत्रमा अरुको खुट्टा तान्ने, निर्माता–निर्माता झगडा गर्ने प्रथा व्याप्त रहेको बताए ।
तर, मिलनले यसो भनिरहँदा उनले नै आफ्नो कुरा काटिरहेका छन् । चैत्र ३० गते बलिउडको ठूलो फिल्म ‘२.०’ चल्ने चर्चा चल्दा मिलनले निर्माण तथा निर्देशन गरेको फिल्म ‘लिलिबिली’ वैशाख १४ मा ल्याउने कुरा भयो । तर, हिन्दी फिल्मसँग नडराई निर्माता तथा कलाकार रोहित रुम्बाले फिल्म ‘नेप्टे’ चैत्र ३० मै रिलिज गर्ने बताए ।
तर, ‘२.०’ हटेपछि मिलनले फिल्म चैत्र ३० मै ल्याएर रोहितमाथि हमला बोले । मिलनले नै निर्देशन गरेको फिल्म ‘ह्याप्पी डेज’को मिति हिन्दी फिल्मसँग डराएर बारम्बार सारियो । तर, अन्तिममा मिलनले वैशाख १४ मा फिल्म रिलिजको डेट तोके । यो मितिमा पहिले नै अभिनेत्री केकी अधिकारीले पहिलो पटक निर्माण गरेको फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’को मिति तोकिएको थियो । मिलनले एक अभिनेत्रीकै फिल्मको मितिमा लगेर जुधाइदिए । हिन्दी फिल्मसँग डराएर भाग्ने, अनी नेपाली निर्मातामाथि नै कुठाराघात गर्ने काम मिलनले गरेका छन् । अनी, उनै मिलन फिल्म क्षेत्रमा खुट्टा तान्ने काम धेरै भएको भन्दै सन्यास लिन्छु भन्न थालेका छन् । यो त, ‘जो चोर, उसकै ठूलो स्वर’ भनेजस्तो भएन र ?
२०७४ चैत २८ गते १७:०३ मा प्रकाशित
समिक्षाको स्टाटस् कस्लाई ?
अड्कलबाजी भन्दा पनि प्रेमबाज देखियो नि पूजा !
बल्ल पो थाहा भए छ केकी अधिकारीलाई मंसिर महिना गएको !
ज्योति लेख्छिन् -‘म हट हुँदा केही समस्या छ ?
निर्देशक राई निर्देशित नयाँ हिन्दी गीत सार्वजनिक
प्रियंका र निककी छोरी १२ हप्ता अगाडि जन्मिइन्, स्वास्थ्यमा समस्या
‘तिम्री आमा, मेरी आमा’ सार्वजनिक
बलिउडकी नम्बर वान नायिका घोषित कट्रिना, यी हुन् अन्य क्रमश हिरोइन
ज्योतीको गीतमा अभिनेता आर्यन
अभिनेत्री प्रियंका चोपडा आमा बनिन्
‘ध्रुव र सारिकाको ‘जित्यो मायाले’मा प्रिन्स र रोशनी
© 2018 Swornim Entertainment Pvt. ltd. सर्वाधिकार सरक्षित. Website Design & Developed by: GWT